FirehoseChat: Nkata saịtị akpakọrịta na Mac, iPhone na iPad | Martech Zone
FirehoseChat: Ejikọtara Nkata saịtị na Mac, iPhone na iPad
FirehostChat bụ a n'ụzọ zuru ezu nwa afọ ngwa ọdịnala na push ificationsma Ọkwa na dị mfe dị ka texting. Pụrụ ọbụna na-enweta chat ificationsma Ọkwa na gị iPhone mkpọchi ihuenyo na ha mobile ngwa. Enwere ike ịmata ndị ọrụ site na ọnọdụ anụ ahụ ha ma ị nwere ike ịmata ibe ha nọ yana ozi nke sistemụ ha. Paiddị akwụ ụgwọ na-abịa na CSS zuru ezu, nkwado ọtụtụ ndị ọrụ na akụkọ nkata gị.
Eleghị anya ị ga - enweta ọtụtụ okporo ụzọ karịa ka ị chere, mana ndị ahịa na - apụ mgbe ha rụsịrị mgbagwoju anya na ọ nweghị onye maara ihe. Mkparịta ụka Firehose na-enyere gị aka ịme ndị ahịa ahụ tupu ha apụ. Ga-ahụ afọ ojuju ndị ahịa na-achọpụta ma chọpụta ihe mgbu nke weebụsaịtị gị.
The ahịa na-abịa na ezi a mma ọrụ interface dị ka mma. Nwere ike banye maka n'efu na FirehoseChat!
Tags: ikorifirehosechatiosipadiphoneMaconline nkataOSXweebụ nkata
Adobe na-abanye n'ime Nkwalite Ahịa yana Ngwa Ngwa Ngwa Ha Dị Njikere
Jun 26, 2014 na 7:31 AM
FirehoseChat bu ihe edere nke oma, ihe di egwu ma di kwa mfe. Anyị na-eche bụ ihe ga-abụrịrị ngwa ọrụ maka ndị nwe websaịtị yana sistemu OS X yana mkpa ọ dị maka nlekọta ndị ahịa mara mma. Oge adịghị anya maka iOS! Anyị hụrụ ya n'anya! Stefan si na rehype.it